တောင်ပံဆိုတာ ကောင်းကင်ရှိမှ အဓိပ္ပါယ်ပြီးပြည့်စုံမယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ကောင်းကင်မရှိတဲ့ အချိန် တွေမှာတော့ တောင်ပံဆိုတာဟာလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ်မှရှိတော့မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ.. ကျွန်တော်မှာ ကောင်းကင်နဲ့အတူ တွဲဖက်နေချင်တဲ့ တောင်ပံတစ်စုံရှိချင်ခဲ့ပါတယ်..။ ဒီတောင်ပံတစ်စုံကိုအားပြုရင်း ဟိုး…လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ အမြင့်အမြင့်ဆုံးတစ်နေရာကို ရောက်သွားချင်ခဲ့ဘူးတယ်… ဒီလိုပါပဲ ဘ၀ရဲ့မွန်ကြပ်မှုတွေ အားလုံးကို တောင်ပံတစ်စုံနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားချင်ခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မွေးဖွားခဲ့ပါတော့တယ်.. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် ကောင်းကင်ပြင်ကြီးရှိရာကို ခုန်ထွက်မိတယ်..။ မွန်းကြပ်ပိတ်လောင်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်တွေဆိုတော့ ကျွန်တော်ရောက်သွားချင်တဲ့ ကောင်ကင်ပြင်ကြီးမှာ လွတ်လပ်မှုတွေအပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်.. မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်အသစ်တွေ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးထင်ခဲ့ဘူးတယ်… အမှန်တကယ် ကောင်း ကင်ပြင်ကြီှးဆီကို ကျွန်တော် တောင်ပံတစ်စုံရဲ့ခွန်အားနဲ့ ပျံသန်းမိလိုက်ချိန်မှာတော့ အပြောကျယ်တဲ့ ဒီကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှာလည်း မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းတို့ရဲ့ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်တွေ… လေဖိအားတွေရဲ့ အကာအကွယ်အတားအဆီးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ တယ်…။
ခက်တာ ကျွန်တော်က အသိုက်အမြုံထဲကနေ စထွက်လာကတည်းက ပြန်လမ်းမဲ့အရပ်ဆီ ခြေဦးတည့် ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မေ့လျှော့နေခဲ့မိ လို့ပဲလေ..။ ကျွန်တော် စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ ဘယ်လိုမှ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ပဲ ကျွန်တော် ကောင်းကင်ပြင်ကြီးရှိရာကို အရဲစွန်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်.. အသိုက်အမြုံထဲကလို မွန်းကြပ်တဲ့ခံစားချက်တွေကနေ လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း မိခင်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေ.. ကြင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်က အဆွေခင်ပွန်းတွေ အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီး.. လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ တစ်ခု တည်းအတွက် ဒီခရီးကို ရွက်လွှင့်တာပဲလေ…။
ကျွန်တော်မှာ ဆောင်းဦးပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်…။ ဒီပုံပြင်လေးထဲက ဂန္ထမြောက် ရင်ခုန်သံ တစ်ချို့ကိုတော့ သူမနဲ့ကျွန်တော်ကလွဲရင် ဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ်မထင်လှပါဘူး။ အသံဖမ်းစက်တစ်လုံးရယ်…. ကင်မရာတစ်လုံးရယ်…သူ့ရှေ့မှာချထားတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစာအုပ်တွေတော့ သက်သေအဖြစ်ရှိခဲ့တာပေါ့။ မှတ်မိပါ သေးတယ်…အဲ့ဒီတုန်းက ကော်ဖီချိုချိုတစ်ခွက်ရယ်… ဂျပန်နာမည်တစ်လုံး ရယ်နဲ့ ကျွန်တော့် ဆောင်းညအိမ်မက် တွေထဲ သူမပဲ စိုးမိုးမင်းမူခဲ့တာပေါ့။
လှပတဲ့ ဒီဇင်ဘာလို့ သူကို ကျွန်တော် ကင်ပွန်းတပ်ပေးလိုက်တဲ့နေ့က ကျွန်တော်လိပ်စာကဒ်လေးပေါ်မှာ သူ့လက်ချောင်းသွယ်သွယ် လေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ယူနီဘောလ် ဘောပင်လေးယူပြီး သူ့အီးမေးလ်လိပ်စာလေး ရေးပေးခဲ့တဲ့နေဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်။ အမှတ်တရလေးပါပဲ။ ဘယ်တုန်းကမှ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းမကျခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ အဲ့ဒီနေ့က အပျော်ဆုံးလို့ ကျွန်တော်ဆိုရင်… ကျွန်တော်ကို လွန်တယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ မှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီနေ့က စက်တင်ဘာလရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်လို့တော့ စိတ်ထဲမှာ ထင်လိုက်မိတယ်။
Posted by ဇ | December 17, 2008, 10:56 am
အင်း..အစ်မလဲ လွမ်းတယ်ဟ အင်းလျားကန်ဘောင်တွေကို…သူများအတွဲလိုက်ချောင်းရတာ ပြောပါတယ်..
Posted by မဆုမွန် | December 18, 2008, 5:08 am
ဟုတ်တယ်၊ ဆုမွန်ပြောသလိ်ုလုပ်။ ကျုံးကို ပတ်ပြေးရင်ပြေး မပြေးရင်လည်း ငါတို့နဲ့ လာသောက်ဟေ့။
Posted by Thinker | December 18, 2008, 4:19 pm
ako met ta’ အိပ်မက် ka MA
Posted by fernando1499 | December 19, 2008, 9:59 am
လက်စသတ်တော့ ဒါကြောင့် ညဉ့်နက်ထိ အွန်လိုင်းမီးလင်းနေတာကိုးးးး စောစောအိပ်မှ အိပ်မက်ထဲမှာ ကြာကြာ တွေ့ရမှာပေါ့ကွယ် :P
Posted by ခွန်မြလှိုင် | December 22, 2008, 5:01 am
အရေးအသားလေးကောင်းတယ် လွမ်းစရာလေး :)
Posted by flurry | December 22, 2008, 10:21 am
Posted by ယံယံ | December 23, 2008, 7:06 am
grilfri la`.amyan sone: sone se; naing par say lo……….
Posted by nayeuntkhaung | December 24, 2008, 3:21 am
i know ur feel my fri. u write very nice. carry on
Posted by su kabyar | December 25, 2008, 9:15 am
သူ တော်တော်အရေးကောင်း ဟိုကောင်မလေးတော့ ဖတ်ပြီး ပိုလွမ်းနေလောက်ပြီ ချစ်သူတွေ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေလို့ 
Posted by naw say | December 26, 2008, 4:43 am
ko….what do u mean in ur latest essay? i think u like Pyin-Ma flower only when after u met me…..ok..may be i was wrong…let it be.
Posted by mee mee | January 13, 2009, 12:50 pm
ကိုအံ့ဘုန်းမြတ် စာတွေ ထပ်မရေးတော့ဘူးလား….
Posted by Anyathian | March 2, 2009, 9:05 pm
Posted by ကြံ့ခိုင် | May 18, 2009, 11:30 am